Baarlamaanka Galmudug oo wax ka bedel ku sameeyay qodob ka mid ah Dastuurka maamulkaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
July 27 (Mareeg)— Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa kulan ay isugu yimaadeen wax ka bedel ku sameeyay qodob ka mid ah Dastuurka maamulkaas, kaasoo qeexayay xuduuda maamulkaas inuu yahay Gobolka Nugaal, iyadoo ay horay uga soo horjeesatay Maamulka Puntland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ay isku raaceen in qodobkaas wax ka bedel lagu sameeyo.
“Qodobkaas laga doodayay wuxuu ahaa qodobka labaad farqadiisa afaraad oo ku saabsan xuduudka dowlad goboleedka Galmudug inay markii hore ay aheyd Gobolka Nugaa, haatan waxaa lagu bedelay xuduuda inay tahay dhanka waqooyi ee dowladda Puntland”ayuu yiri Cali Gacal Casir.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in markii hore dastuurka maamul goboleedka Galmudug ay ansixiyeen Ergooyin la keenay Cadaado, waxaana uu xusay in maanta qodobkaas la bedelay.
Tallaabada wax ka bedelka lagu sameeyay qodobka ay Puntland dhibsaneysa ayaa loo arkaa mid yareyn karta walaaca ay horay uga qabtay in dhulkeeda lagu soo xadgudubay, waxaana la ogeyn sida ay uga soo dabci karto go’aankeedii ahaa in aysan aqoonsaneyn Maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa horay u sheegay in hadii xuduuda Maamulka Galmudug uu yahay Gobolka Nugaal, ay Xuduuda Puntland ay noqoneyso Guriceel iyo Godinlabe.
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa dhowaan sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo Maamulka Puntland, si ay uga wada shaqeeyaan Nabadgelyada iyo deris wanaaga ka dhaxeeya labada maamul.
Si kastaba ha ahaatee qodobkan wax ka bedelka lagu sameeyay ee dastuurka Maamulka Galmudug ayaa ku soo beegmaya, iyadoo lagu wado in 29-ka bishan in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir looga hadlayo hiigsiga sanadka 2016, iyo qorshaha mudada dowladda u haray.